KOLIKOLY REVOLISIONERA · L'Homme, son aura et son évolution
> KOLIKOLY REVOLISIONERA
Classé dans : — cyrius @ 13:38
Mpanatontosa sarimiaina, eo am-pitadiavana famatsiam-bola. ora 2 no ilaiko ahavitana sarimiaina maharitra 1mn. Mbola lavitry ny hahaita toy izany aloha na ny kalazalahy any ivelany aza.
Tantara noforonina ity, raha misy amin’ireo mpandray anjara ato mitovy amin’ny olom-pantatrao, na vadinao, na 2ème bureau-nao, tsarovy tsara izao ; kisendrasendra fotsiny no anton’io fitoviana io.
Fa inona ity manjo anao ramatoa Misitra a, mihisitrisitra be tsy misy toa izany ianao eo ambonin’ny sezanao, lanin’ny parasy angaha izato ianao sa voatsindron’ny tsilo.
Sa tsy mahatamana ity seza ka tsy mampahazo aina ?
Tsy mahazo aina inona, mitady ny sezako angahy ity koa hoe tsy mahazo aina ah tsy mazo aina.
Tsy fantatr’ity fa Misitry ny fampisehoana sy ny Kolokoly aho ?
Hampiseho an’ity an’ireto taratasy fandraisan’anjara ireto no mampihetsiketsika ahy eto.
Mahazo mijery itena raha hahita tsilo na parasy eo.
Rehefa vita izany dia jereo ireo antontan-taratasy ireo, misy manampahaizana be tena mihoatra noho ireo kalaza sy fanta-daza any ivelany ao.
Ho sahirana ity amin’ireo, inona no hatao ?
Inona no olana amin’ity Ramatoa Misitra a, tsy misy olana ity, tsy mahazo io dia izay, mbola tsy nanomboka ny fifaninanana dia efa vita lisitra ato ireo hahazo. Hitanao, ireo izao ny sasany ireo efa miandry eo ambody rindrina ireo sahady, ireo ambodin’ny biraon-dry zareo misahana ny fifaninanana e.
Dia atao ahoana ireto ?
Tsy mampiasa saina izany e, tsy fantatrao angaha fa izaho no talen’ny kolokoly ato amin’ny ministeranao ? Mpikolokolo an’ireo kolokolon’olona mpanao kolikoly. Havanana amin’ny fikolokoloana ny kolikoly revolisionera.
Raha izay ireto antontan-taratasy ireto ve, tsy miteny ireo.
Izay Ramatoa Misitra fa efa samy nahazo ny anjarany isika, handeha aho aloha.
Ka raha tonga aty izany ireo ekipan’ny mpiady amin’ny kolikoly dia ahoana ?
Ireny ve, tsy mahita ny lalana mankaty ireny, raha vao hitako eny an-dalana dia hasaiko miverina.
Sady mivoaka ny birao ihany ingahy tale.
Nony nivaly ny fifaninanana Posy Kara dia nifanena tamina mpandray anjara matotra tsara ingahy tale, mpanatontosa sarimiaina ranamana
Ah Andriamatoa Talen’ny Kolokoly, soa fa nahita anao, fa ahoana rangahy ity no tsy nahazo tamin’iny fifaninanana iny aho a, nefa na ry Walt Disney aza tsy maharaka ahy amin’ity taranja ity. Ianao ve sahy milaza fa ireo mpanao mozika nahazo ireo misy lafiny andresen’ireo an’ i Mickael Jackson ? Misy lafiny andresen-dry zalahy mpanao sarimiaina nataonao nahazo ireo an’ireo andrarezina any ivelany ve ?
F’angaha nisy nilaza tamin’ise hoe hahazo amin’iny ise ? Efa hitan’ise tsara ireo olona voaomana hoe hahazo, sa tsy hitan’ise ireny ? Ilay nitobitoby teo amin’ny ilan’ny atsinanan’ny birao misahana ny fifaninanana ireny ?
Vao nifarana ny fandraisana ny antotan-taratasy dia efa hitan’ise tsy niala teo ireny nanomboka ny maraina ka mandrapaharivan’ny andro, isan’andro, sa tsy izany ?
Tsy ny mahay rangahy ity no mahazo a, raha nahay ireny tsy nanao kolikoly.
- Voamariko tsara ireny fa ny tsy nampoiziko dia ny hoe marina ny eritreritro hoe mpanao tsolotra ireny, efa nomanina hahazo mialohan’ny hanombohan’ny fitsarana..
Ka inona no mahagaga amin’izany r’ise a, tsy fantatr’ise angaha aho ? Izaho no talen’ny kolokoly , mpikolokolo an’ireo kolokolon’olona mpanao kolikoly. Havanana amin’ny fikolokoloana ny kolikoly revolisionera.
Tsy ara-dalàna anie izany andriamatoa Tale e, f’angaha tsy fanavaozana sy fivoarana sy fampivoarana no tanjona amin’iny fifaninana iny e.
Ka raha tsy ara-dalàna, mampaniry volo ny manara-dalàna sa mahamainty volo ?
Manaraha lalàna fa ny volom-bavan’ise foana no hitombo eo. Fanavaozana sy fampivoarana ny Kolikoly no tianay hambara e, tsy soratana fotsiny mba tsy ho fantatry ny lavamaso vahiny.
Kolikoly izao no pasipaoro.
Tsy misy iraharahianay an’izay lalàna rangahy ity a.
Tsy fantatr’ise angaha izahay ? Izahay anie malaza e, malaza be izahay sy ramatoa misitra, mahay mandihy iny ramatoa misitra iny a, hitan’ise ilay tamin’ny fampielezan-kevitra indray mandeha iny ?
Nangovitra ny sehatra, saiky ho tapaka hatramin’ilay hazo fisaka tao ambany lampihazo nandihizany.
Faly mihitsy izy natrehin’ny mason’ireo mpanatrika maro hoe malaza e, malaza.
Ka hanao inona ise fa izahay malaza, na malaza amin’ny kolikoly izahay na malaza amin’ ny fanenjehana parasy, tsy raharahanay izany, Malaza izahay dia izay, izay tianay io.
Izahay izao no eto,
Tsy mampatahotra anareo ve ny fanaraha-mason’ ny birao miady amin’ny kolikoly andriamatoa Tale ?
Izay fanaraha-maso ve r’ise, hivoaka atsy aho izao dia efa firy ny olona manara-maso ahy ao ?
Dia mitohitohy izany mandra-pahatongako any an-trano, efa hoe malaza ho’aho izahay.
Sady henjana be raha resaka fampisehoana koa, kaominina maro izao no nisaotra anay hoe vitanay ny asa tokony ho nataony.
Nefa tena manampy anareo amin’ny fanatrarana tanjona lehibe ho an’ny firenena anie ity tetikasako ity e ? Fanampiana lehibe ho anareo izany sady mba mahavelona anay e.
Misy ohatrinona any amin’ise, dia eo hoe hojereko ity anaran’ise ?…
Tsy anaran’ny fianakavianay io, tsy fianakavianay ise, tsy fianakavian-dRamatoa Misitra, tsy misy tompon’andraikitra hamaky ny antontan-taratasin’ise ao.
Izay any ampaosin’ise no asa.
Efa lany natobako tamin’ny fanatontosana ny fandraisako anjara tamin’ity ny ny volako rehetra, hatramin’ny taim-paosiko, tsy manana intsony aho andriamatoa Tale.
Natoky loatra ny fahadiaovan’ny fitsarana aho dia izao, aotra ariary no ato am-paosiko, tsy misy na ny hivelomana aza.
Angaha ise izao maty ? Ka hoe hivelomana amin’ny inona ?
Tokony niteny efa ela ingahy hoe tsy manam-bola, izao lany teto ny fotoanako, veloma ise, azafady r’ise a, avereno aty indray ny velomako, tsy tokony hatao veloma ise fa mandany ny fotoanako fotsiny.
Mandehana amin’izay manolotra tetikasa any amina fifaninanana madio any, fa raha izahay aloha tsy hahvita izany e, raha mbola eto koa izahay.
Hosivaninay ny teti-kasa amin’ny taona ho avy tsy hahafahan’ise mitady fifaninana madio io handray anjara.
Tsy matahotra an’Andriamanitra ianao Andriamatoa Tale, ary ny lehibenao sy ny lehiben-dRamatoa Misitra hanao ahoana eo anatrehan’izao kolikoly miharihary toy ny vay an-kandrina izao ?
Inona rangahy ity no atahoranay eo a,
Izahay anie manam-bava e, taim-bava no miasa
Mandehana ise ao amin-dRamatoa Misitra ao raha tsy mahazo taim-bava be.
Sady ireny angaha sahin’ny lehibeny esorina na manao tsolotra aza.
Ny taim-bavany dia ampy hitazonany ny toerany rangahy ity a.
Miampy ny fampisehoana ataony, adray.
Maromaroa ny toy izao r’ise, izahay aloha dieny eto, hanangona izahay.
E e e, ise koa dia tazoniko eto fotsiny, mandehana aloha mitady vola.
Aza manao an’izany rangahy ity ah, Mba matahora ianareo an’Andriamanitra,
Sahinareo ve ny miteny an’ireny hoe tetikasa mendrika nefa tetikasa natao nahazo fotsiny, noho ny kolikoly ?
Sao lahy ka itony tetikasako itony no hahitan’ny zanaka aman-jafinareo ny anjara masoandrony any aoriana any.
Sao hataoko hoe adala ise ka ho tezitra, asa inona ? Any amin’ise ve ?
Ise olona tsy manao kolikoly koa ahoana ny zanakay no hiasa any amin’ise.
Ny anay anie kolikoly fotsiny ireny dia mahazo asa.
Tambazotra efa am-perinasa sady ifandovanay mianakavy anie leisy itony kolikoly itony e.
Mamoaka am-paosy vola kelikely, omena ny mpandray kolikoly, dia voakolokolo ny ho avin’ny asanao sy ny tetikasanao.
Izaho anie Talen’ny Kolokoli e, sao hadinon’ise ?
Dia ahoana ianareo tarihin-dRamatoa Misitra hanadio lalana sy tatatra ity, toa hoe manao asa soa hono ?
Ise ve mitapy e, zavatra misy volaa mihodinkodina be ao rangahy ity ah, ianareo no jamba.
Ny anay anie vola e, vola foana, ho avy koa izao ny tetikasanay hikarohanay mpanao tsolotra vaovao.
Dia efa ilazao an’izany ny havana e, ilay misimisy patsa ireny.
Amin’izao andro mazava be izao ve mbola misy manao tsolotra tsy tahotra tsy henatra toa anareo izao ihany ? Fa atao inona ny lalàna.
Ny afindrafindrao r’ise a, tsy azo avela.
Ny lalàna indray, hodikaina no ilàna an’io.
Sao tsy misy saran-dalana hodiana koa ise aloha rehefa avy eto.
Fiara tsy mitondra mpandeha ny ahy ity à, sady ise koa tsy handeha amin’ity.
Izay r’ise a, handeha hitety an’ireo havan-tetezina rehetra indray aloha, ilay havana raha misy patasa ireny fa mitady mpanao tsolotra vaovao indray izahay koa.
Tsara tsidihaina itony pejy itony raha hampiasa vola haingana : Mes projets bandes dessinées
Mety hahaliana anao koa ireto : Ny mesia : http://cyrius.unblog.fr/?p=2306 – Le messie : http://cyrius.unblog.fr/ , Ary maro mpitsidika ireto pejy momba ny fahendrena Malagasy ireto ireto : (Ny herin’ny fanahy na ny hasina) http://cyrius.unblog.fr/?p=1672 – (tantara miafin’i Madagasikara) http://cyrius.unblog.fr/?p=2281 – (Ny fanahy no olona) http://cyrius.unblog.fr/?p=35, ary ao anatin’io pejy io ihany (Ny fanahy faha-7, Zanahary na Aura Atmique) http://cyrius.unblog.fr/?p=1876 – (Iza no tompon’ny fanandroana Malagasy ?) http://cyrius.unblog.fr/?p=2022 – (Leviatana na rivo-doza) http://cyrius.unblog.fr/?p=1589 – (Andrianampoinimerina sy ny vintany) http://cyrius.unblog.fr/?p=1994 Ary tsy azo adino ity pejy iray ity : Le prince de la paix http://cyrius.unblog.fr/?p=1808 . Teny vahiny koa ity pejy ity nefa Fahendrentsika ka araho tsara http://cyrius.unblog.fr/?p=37